Thwebula FrostWire 1.6.4 isizulu – Android – Vessoft
FrostWire – a software ukulanda futhi wabelane amafayela in a network BitTorrent. FrostWire inikeza search fast amafayela futhi kuhlanganisa esakhelwe chat ukuba baxhumane kubasebenzisi. Isofthiwe ikuvumela ukuba wabelane amafayela namanye amadivaysi usebenzisa uxhumano wireless noma nge-internet. FrostWire kuhlanganisa player esakhelwe ukudlala amafayela alalelwayo video. Isofthiwe kwenza ukulawula ngokulayishile futhi uvimbele ukufinyelela amafayela akhethiwe. FrostWire iqukethe umtapo amafayela okuyinto ihlukaniswe izigaba futhi ikuvumela ukuba kabusha, susa noma ukudlulisa amafayela ezinye izicelo.
Search Easy of amafayela
Download Fast of ifayela
Amathuba Wide of izilungiselelo
Amazwana on FrostWire:
FrostWire Ahlobene software:
Sesifufula An lula ukufunda iklayenti sesifufula nge iqoqo amathuluzi awusizo ukulungisa ifayela izidingo umsebenzisi.
Downloaders Imenenja esikahle ukulanda idatha izinhlobo ezahlukene. Isofthiwe isebenzisa ubuchule esikhethekile ngokushesha ifayela ukulandwa.
English, Українська, Français, Español... BBC News 3.7.1.9
E-mail Isicelo ukusebenza nge-imeyili kusuka service Google. Isofthiwe elawula mail nge-akhawunti amaningi ukucupha siqu.
English, Українська, Français, Español... Guns 1.99
Imidlalo Simulator ukubonisa izikhali ezahlukene nolwazi ngakho. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukudubula bamatshe ahlukahlukene kanye uqinisekise izici kwezikhali.
Inethiwekhi Yokuxhumana Imenenja esikahle ukubazi futhi ukuxhumana. Isicelo kwenza ukubuka amaphrofayli umsebenzisi, hlela ulwazi lomuntu siqu futhi anikeze izipho virtual.
Chat Ukukhulumisana Voice The instrument ukushintshanisa umbhalo nezwi imiyalezo. Isofthiwe kwenza ukuxhumana in izingxoxo group and ukushintshanisa amafayela noma imininingwane yakho yokuxhumana.
English, Українська, Français, Español... Facebook Messenger 93.0.0.15
English, Français, Español, Deutsch... Mindomo 3.0.15